म मोटी केटी थिएँ.. ११ बर्षको उमेरमै मलाई एउटा ..उमेर पुगेकाले मात्रै पढ्नुहोला - Samudayiknews
सेप भनेको के ? इमान्दारीका साथ भनूँ मेरा स्तन सधै उस्तै देखिन्छन् । महिलाको एउटा अंग बाँध्ने(ब्रा)लाई सेक्सी भनिनु भ्रमपूर्ण प्रचार हो । ब्रालाई अक्सर सेक्सी भनिन्छ ।अबहाम्रो स्तन हाम्रो रहेन, पवित्रता, पाप वा लाजका कारण । मेरो स्तनका लागि सधैं आमाको अनुमति जरुरी भयो । कहिल्यै मैले मेरा स्तन मेरा अनुसार राख्न पाइनँ । मेरा बा र छिमेकीको उपस्थितिमा मैले ब्रा पहिरनै पर्ने भयो ।
उनीहरुका अघि म कहिल्यै भित्र ब्रा नलाएर बाहिर अर्कै लुगाका साथ पनि उपस्थित हुन सकिनँ । मेरा स्तनलाई सार्वजनिक सवारीमा पुरुषबाट सुरक्षाको जरुरी भयो, जसले मलाई अपनमान गर्न चाहन्छ । मेरा सबै प्रेमी, जो मेरा स्तनको तारिफका गरेर कहिल्यै थाकेनन् । उनीहरु मेरा स्तनप्रति दिवाना थिए ।
सबै महिलाको स्तन सिर्फ पुरुषको आवश्यकतता र उनका इच्छाका लागि हुन्छन् । हरेक केटीको नारीत्वको दुःखपूर्ण यात्राको सुरुवातको प्रतिक हो स्तन । हाम्रा स्तनलाई किन सिर्फ शारीरिक नजरले मात्रै हेरिन्छ, यसमा अरु केही छैन ?
नग्नता संस्कृतिकै नयाँ लाजलाग्दो अवधारणा हो । पहिले यसलाई कला र उत्साहका रुपमा लिइन्थ्यो । वास्तवमा यो पनि भनिन्छ ब्लाउजको प्रचलन आउनुअघि महिला माथिको कपडा पहिरदैनथे । महिला टपलेस रहेकोमा लाज पनि मान्दैनथे । प्राचीन मूर्ति हेर्नुहोस् एकपल्ट, तपाईंहरु थाहा पाउनुहुनेछ म के भन्ने चाहन्छु ?
मालाबारमा कुनै महिलालाई आफ्ना स्तन छोप्ने अनुमति थिएन । अय्या वैजुंदरकोअ सर्थनमा केही समुदायले महिलाले पनि माथिल्लो शरीरमा समेत कपडा लगाउन पाउनुपर्ने भनेर लडाइ नै गरे । यसको प्रतिरोधमा १८१८मा उच्च जातिकाले हमला नै गरेका थिए ।
विभिध लडाइँका बाजुद १६ १५९मा मद्राका गर्भनरको दबाबमा त्राणकोरका राजाले घोषण गरे– सबै महिलाले माथिल्लो शरीरमा पनि लुगा लगाउन पाउनेछन् । तर, एउटा शर्त थियो, उच्च जातिका महिलाको पहिरनसँग मेल खानुहुँदैन । आज हामी अर्काे एउटा लडाइँ लडिरहेका छौं ।
Prevवीरगन्‍जमा रहेका तीन भारतीयमा कोरोना पुष्टि…
Nextसुर्खेत पुग्दासम्म बाँचिएछ भने अर्को निर्वाचनमा दललाई सिकाउँछु अंकगणित